Nepali movies - kiss scenes
Topic: Nepali movies - kiss scenes
Author Topic: Nepali movies - kiss scenes (Read 21503 times)
« on: November 26, 2009, 01:19:00 PM »
Re: Nepali movies - kiss scenes
« Reply #1 on: November 26, 2009, 01:19:51 PM »
« Reply #2 on: November 26, 2009, 01:21:06 PM »
« Reply #3 on: November 26, 2009, 01:22:55 PM »
« Reply #4 on: December 01, 2009, 11:18:04 AM »
Ma pani nepali hero bannu paryo jasto 6....
« Reply #5 on: January 11, 2010, 05:08:33 PM »
"आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ" फिल्म
नायिका अरुणिमा र नवनायक मुकेशले निरन्तर एक मिनेट किस गरे
« Reply #6 on: March 05, 2010, 12:58:43 PM »
त्यो किसको किस्सा अलग
कथा मन परे र चरित्र तगडा भए किस सिन दिन आपत्ति नहुने धारणा राख्छिन् नायिका अरुणिमा लम्साल । तर, म्ाोफसलका दुई दर्जन हलमा शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुन लागेको आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ फिल्ममा नवनायक मुकेश ढकालसँग आफूले दिएको टंक किसको प्रचारप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
पहिला निर्माता/निर्देशकसँग मिडियामा नल्याउने सर्तमा सो किस सिन सुटिङ गरिए पनि उनीहरूले प्रचारमा ल्याएकाले आफ्नो चित्त दुखेको अरुणिमा बताउँछिन् । भन्छिन्, 'चरित्रमा डुबेर किस सिन गरेँ । तर, निर्माता/निर्देशकसँग पहिल्यै सो दृश्य मिडियामा प्रचार नगर्ने सहमति भएको थियो । उहाँहरूले त्यसैलाई हाइलाइट गर्नुभएको छ ।'
करिब एक मिनेट लामो सो किस सिन कथाको मागअनुसार नै गरेको दाबी गर्दर्ै अरुणिमा भन्छिन्, 'हलमा हेर्न दर्शकलाई मनोरञ्जन होस् भनेर सट दिएँ । तर, उहाँहरूले सम्झौताबमोजिम काम गर्नुभएन । आउनु आइहाल्यो । अब मलाई आपत्ति छैन ।'
आफू घरपरिवारमा त्यस्ता कामुक दृश्यले असर पार्ला भन्ने ठानेर उक्त किस सिन मिडियामा नल्याउने सर्त राखेको बताउँदै उनले भनिन्, 'अब मेरो केही गुनासो छैन । हुनु भइहाल्यो । मेरो परिवार बुझ्झकी छ । केही असर पदैन ।'
फिल्ममा हेर्दा टंक किसजस्तो देखिने भए पनि उक्त सिन टंक नभई 'टच सिन' मात्र भएको दाबी उनले गरेकी छिन् । 'मैले ओठ मात्र चलाएकी छु । त्यो टंक किस होइन,' उनी भन्छिन्, 'त्यो किस सिन मात्रै हो । फिल्म हेर्दा जो-कोहीले पनि बुझ्छ ।' सो दृश्य छायांकन गरेर गएपछि मात्रै आफ्नो पति अमितलाई जानकारी दिएको अरुणिमाले बताइन् । 'श्रीमान्लाई आज मैले यस्तो सिन दिएँ भनेँ । उहाँले केही प्रतिक्रिया जनाउनुभएन,' अरुणिमाले भनिन्, 'त्यो त अभिनय मात्रै हो । उहाँ मेरो पेसा बुझ्नुहुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई यस्तो कुरामा चासो हुदैन ।'
यसभन्दा पहिला अरुणिमाले अभिमन्यू फिल्ममा नायक निखिल उप्रेतीसँग चुम्बन दृश्य दिएकी थिइन् । 'सुटिङको वेलामा सयौँ मान्छेको भीड हुन्छ । मासमा किस सिन गर्नुपर्ने भएकाले कुनै फिलिङ्स नै आउँदैन,' उनी भन्छिन्, 'म मात्र काममा ध्यान दिन्छु । दर्शकले मनोरञ्जन लिऊन् भनेर पनि त्यस्ता दृश्य दिइन्छ । यसमा आपत्ति छैन ।'
ऋषि लामिछानेको निर्देशनमा मुनाल घिमिरेले निर्माण गरेको आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छको अर्काे एउटा दृश्यमा अरुणिमाले लगाएको मिनिस्कर्ट पंखा लगाएर उठाइएको छ । त्यो कामुक दृश्य पनि सहमतिमै गरेको खुलासा अरुणिमाको छ । 'कलेजका उटपट्याङ केटाहरूले पंखा लगाएर मेरो स्कट उडाउँछन् । दृश्य रमाइलो छ,' फिल्ममा आफूले पाएको रोलअनुसार निकै राम्रो काम गरेको जिकिर गर्दै उनी भन्छिन्, 'पंखा लगाएर स्कर्ट उडाए पनि मैले भित्र हापपाइन्ट लगाएकी छु । सिन भल्गर लाग्दैन ।'
निर्देशक ऋषि भने फिल्मको पात्रको चरित्रअनुसार ती दृश्य जरुरी भएको दाबी गर्छन्, 'पूर्ण मनोरञ्जक फिल्म बनाउन त्यस्ता दृश्य पनि आवश्यक ठानियो ।' अरुणिमाको असन्तुष्टिबारे उनी भन्छन्, 'दर्शकका लागि खिचिएका दृश्य मिडियामा ल्याउँदा के आपत्ति भयो र ? यो सामान्य कुरा हो ।'
« Reply #7 on: March 05, 2010, 12:59:14 PM »
« Reply #8 on: March 05, 2010, 06:04:05 PM »
रमाइलो पोस्ट । हलिवुडको सिनेमामा चुम्बन सामान्य लाग्छ तर नेपाली सिनेमामा भयो भने ठुलो कुरा लाग्छ । के हो ला है । सायद जे कम देखिन्छ त्यहि ठुलो लाग्छ ।
तर चुम्बन सिनहरु नेपाली सिनेमामा देखिन थालेकोलाई प्रगति भन्ने कि नभन्ने ?
« Reply #9 on: March 05, 2010, 11:34:29 PM »
Quote from: hidemyass on March 05, 2010, 06:04:05 PM
khai ke khai ke ....
namrata ko video ta normal lagna thali sakyo aajkal...
yesta kiss ko ta ke kura garnu ra..